Baarlamaanka oo ku dhegan Laamaha Amaanka & Dhacdadii Soobe oo Su’aalo la iska Weydiinayo – Kismaayo24 News Agency
Baarlamaanka oo ku dhegan Laamaha Amaanka & Dhacdadii Soobe oo Su’aalo la iska Weydiinayo
by admin 19th October 2017 0226
Guddiyada Joogtada ee xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa saakay lagu wadaa in kulan Su’aalo lagu weydiinayo masuuliyiinta Laamaha Ammaanka dalka ay kula qaataan xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.
Waxaana Laamaha Ammaanka wax laga weydiin doonaa qaraxii 14 kii bishan ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Degmada Hodan, kaasi oo ay ku dhinteen, kuna dhaawacmeen dad fara badan oo shacab ahaa.
Xildhibaan Sidiiq Warfaa Xoghayaha Guddiga Joogatada Difaaca Baarlamaanka ayaa sheegay in maanta qorshuhu yahay in ay kulan la yeeshaan Laamaha Ammaanka, si wax badan looga ogaado Qaraxii dhawaan ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho.
Waxaana uu shaaca ka qaaday in kulankaasi waxyaabihii ka soo baxa ay la wadaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaritaano dheeri ah oo ku aadan mashaqadii ka dhacday Isgoyska Zoobe, iyadoona Laamaha Ammaanka looga fadhiyo soo bandhigida Natiijada ka soo baxday baaritaanadaasi.
Kacdoonka Shacabka ee ka dhashay Qaraxii Zoobe ma sii socon doonaa?
Imaaraadka Carabta oo qaaday Talaabado ay ku taageereyso dadka wax ku noqday Qaraxii Soobe
Xildhibaanada Golaha shacabka oo kulankoodii ugu horeeyey ku yeelanaya xarun cusub
Dhageyso Taliyihii Ciidanka Asluubta oo ka hadlay sababta xilka looga qaaday..
gurey 23rd February 2018
Akhriso: K24 Oo Heshey Magacyadda Liiska Gudiga Doorashooyinka Ee Uu Madaxweyne Xasan goordhaweyd Magacaabey, Iyadoona………
Tifaftiraha K24 30th June 2016